N'ike mmụọ nsọ na ihe ọmụma maka freeride ndị hụrụ | Ski | Snow - ULLER
Mmetụta nke nnwere onwe nke ugwu ahụ na-enwe ike ịkọwa site n'eziokwu "ndị na-agba ịnyịnya n'efuSite n'obi. Oyi, snow, ikuku na onyonyo di nma nke masiri anyi, abughi onu. Ndị hụrụ egwuregwu ugwu, ha nwere ya doro anya! Omume nke usoro a niile bụ ihe na-atọ ụtọ ma n'otu oge ahụ na-akasi obi, mmega ahụ na-achọsi ike gụnyere ahụ dum ma melite ntachi obi. Oge snow dị ebe a ma ọ bụ oge iji mee ya kachasị site na ụfọdụ egwuregwu ndị a ma ama dịka ịgba ọsọ na snowboarding, ọ bụ ezie na afọ ọhụrụ a 2021, ọ na-akpọkwa gị ka ị na-eme egwuregwu ugwu ndị ọzọ, ma nwee obi ụtọ na mmemme ndị a na-eme n'èzí. ikuku ohuru.
Freeriders amaghị oke! Adrenaline bụ igwe nke na-akpali anyị ka anyị na-ekwukarị ee maka ihe omume na ahụmịhe ọhụụ. Nke a bụ kpọmkwem mmụọ achọrọ mgbe ị na-arị ugwu ahụ. Ọ bụ ya mere egwuregwu ugwu na oge oyi bụ otu n'ime ihe kachasị njọ ma bụrụ nke ndị freeriders na-ahọrọ. Ọ bụrụ na ihe ị na-achọ n'afọ a bụ ime ka ndụ ghaa oke, attentionaa ntị na egwuregwu ugwu na-eti mkpu nnwere onwe!
N'akụkụ ugwu… Enwere nnwere onwe nanị maka ndị nweere onwe ha!
N'ike mmụọ nsọ na ihe ọmụma maka ezi freeriders!
N’ezie, ị nụworị banyere egwuregwu a!
A na-ewere ya dị ka otu n'ime ndị kachasị ewu ewu maka asọmpi n'oge oyi. Alpine skiing gụnyere ịgbada n'oge kachasị dị mkpirikpi ga-ekwe omume site n'ugwu, na-agafe egwu egwu, yana oge gafere na narị ụzọ nke abụọ.
Ọ bụ ezie na ọ bụ egwuregwu a na-ewu ewu, ọtụtụ oge anyị na-enwe mgbagwoju anya mgbe anyị na-achọpụta ọdịiche nke usoro ndị ọzọ. Lee ụfọdụ atụmatụ:
Ejiri ikiri ụkwụ Alpine na ikiri ụkwụ buutị nke dị na bọọdụ ski.
Site n'iji usoro eji agbago ugwu, nke bụ ebe mmalite ahụ malitere.
Mmegharị Zigzag iji rute nnukwu ọsọ ma gbadata mkpọda ngwa ngwa o kwere mee.
N'ime ọzụzụ a, ị nwekwara ike ịchọta ụdị dị iche iche:
Ọ bụ ihe a na-eme n’elu ugwu na-enwe ọnụ ụzọ dị ọtụtụ, na-adịkarị ibe ha nso. Onye na-eme egwuregwu kwesịrị ịgbanye ọsọ ọsọ ma dị mkpirikpi, ebe ọ bụ na onye ọ bụla aghaghị iji aka nri ma ọ bụ aka ekpe gbaa ya gburugburu.
Modzọ ọzọ dị iche iche ebe usoro ịgbagọ dị mkpa. N’okwu a, ọnụ ụzọ ámá ahụ dịpụrụ adịpụ karịa na Slalom.
Ọ bụ ụzọ nke ịgba ọsọ Alpine na ọsọ kachasị ọsọ na ebe ọnụ ụzọ na-adịkarị anya.
Super ibu slalom
Amara nke ọma dịka Super-G. Ọ bụ ule nke ọsọ, ya na ndị ọzọ na-atụgharị anya ma ogologo ma ọkara, yana ọnụ ụzọ ndị ọzọ dị nso.
Snowboarding bụ otu n'ime egwuregwu kachasị amasị n'ugwu!
Inwe ike slide ma mee stunts n’elu snow bụ otu n’ime ihe ndị kachasị amasịkarị n’oge oyi. Egwuregwu a, ma e wezụga ịbụ ihe na-atọ ụtọ, dịkwa oke asọmpi, na-achọ nnukwu ndọkụrịta na echiche nke itule.
Dị ka ị maara, a na-achịkọta snowboarding n'ụdị dị iche iche, na-amalite site na freestyle, nke gụnyere ọzụzụ nke ọkarapipe, nnukwu ikuku na quarterpipe. Tụkwasị na nke ahụ, e nwere usoro ndị ọzọ freeride ndị na-eme egwuregwu na-ahụkwa n'anya: slalom yiri nke ahụ, mbadamba na ugwu ugwu.
N'ime ski na ịgba ọsọ, ị nwere ike ịnwe ezi nnwere onwe n'okwu ya niile.
You maraworị ya IKPERE?
Freeride in Spanish pụtara “ịnya ụgbọ ala n'efu”. Ọ bụ inwe nnwere onwe zuru oke, na-enweghị oke ugwu, n'agbanyeghị nsogbu, mkpọda ma ọ bụ ihe ọ bụla gbara ya gburugburu. Ọ bụ ịnụ ụtọ okike dị ọcha, ebe ọ bụ na ị na-agba ọsọ site na mkpọda, na mpaghara nke nwa agbọghọ na-amaghị nwoke na ugwu ndị dị egwu.
Anyị maara na njem na-akpọ gị, mana ọ dị ezigbo mkpa ịnwe ahụmịhe gara aga na ihe ọmụma dị mkpa iji nwee ọ enjoyụ na ịdọ aka ná ntị a ma ghara imerụ ahụ.
Na freeride ị nọ n'akụkụ ọhịa nke ugwu ahụ. Ya mere, ị ga-enwerịrị ụdị ịgba ọsọ ski ma ọ bụ snowboarding iji nwee ike ịmịcha n'akụkụ dị mgbagwoju anya karịa mkpọda. Have ga-enwerịrị ike ịme egwuregwu ahụ.
Na N'otu aka ahụ, mata ụdị snow. Enwere crusty, ikuku ikuku, snow siri ike, uzuzu, wdg. Anyị anaghị ahụkarị otu snow mgbe ị na-eme ski.
Ntụ ntụ ntụ kachasị mma maka apụ-piste ka ọ na-amị amị n’ụzọ dị mfe ma dọọ skis ka mma. Ọ gaghị abụ ikpe mgbe niile. Ya mere, ịgba ọsọ na ụdị snow dị iche iche ga-enye ahụmịhe ahụ, n'ihe gbasara ịnọ n'ọnọdụ nwere ọnọdụ dị iche iche.
MGBE MB F
Ọ bụ ihe amamihe dị na ya ị ga-esonyere gị mgbe ị na-apụ n'okporo ụzọ ahụ, ọ bụrụ na ihe emee ma ị nwere ike ịnyere aka. Freeride bụ ihe omume dị egwu, ọ nweghịkwa ihe ọghọm ya. Ikpuchido onwe gị site na iji akụrụngwa kwesịrị ekwesị dịka opekata mpe ga-adị mkpa karịa iji gbochie ma mee ya n'ụzọ dịtụ nchebe.
Jiri okpu agha, ugogbe anya, arva na shọvel. Ikpeazụ ma ọ dịghị ihe ọzọ, a ghaghị iburu ihe ize ndụ nke nnukwu mmiri n'uche, ọ bụ ya mere o ji dị mkpa ịmara ọnọdụ nke snow, ọchịchọ nke mkpọda, gbakọọ jumps ma gbochie oke o kwere mee.
Dika anyi maara na ugwu na uzo di n’efu na akwali gi, lelee ufodu uzo kacha mma maka freeride:
A na-ahụta ebe ezumike French dị ka otu n'ime ntụ kacha mma freeride na Alps niile. Ebe ị nwere ike ịgba ọsọ naanị n'akụkụ ugwu nke ugwu.
Anyị na-aga n'ihu na njegharị na France. N'okpuru ụkwụ Mont Blanc. Ọ bụ ntọala maka mbipụta 2015 nke Freeride World Championship. A na-ahụta ya dịka akara mba maka egwuregwu dị egwu.
Agwaetiti Lofoten, Norway
Ọ dị n'ebe ugwu nke Arctic Circle. Ọ bụ paradaịs maka ndị hụrụ freeride hụrụ n'anya.
FỌR F ND L DRE N'IME WHOFỌD D D DKA “ONYE”
Ọ bụ naanị onye na-agba ụgbọ mmiri Spanish nke jisiri ike nweta ya Freeride World Tour. Na 2019 etinye ya na TOP 10 nke ndị egwuregwu gburugburu ụwa, ndị na-achịkwa ịdọ aka na ntị a.
Onyinye Ekelechukwu (@olidoke)
Onye French Candide Thovex bụ onye ama ama na mba ụwa, na ụwa nke freeride skiing. Ọ bụ naanị onye na-agba ịnyịnya nke rụzuru, na mgbakwunye na Freeride World Tour, nrite ọla edo atọ na X Games, na usoro atọ: Big Air, Superpipe na Slopestyle.
Ariana Nwachukwu (@nwachukwuken)
Onye na-agba Italiantali meriri Freeride World Tour na mbipụta 2018 na 2019. Na instagram ị nwere ike ịchọta vidiyo na foto nke aghụghọ ya na ahụmịhe ya na freeride.
Onyedikachukwu chukwuka (@nweke_uchechi)
Nkọwa Spanish maka snowboarding nke jisiri ike ịbanye Freeride World Tour. N'oge na-adịbeghị anya, ọ malitere ọhụụ ọhụrụ ya ebe ọ na-agwa curiosities nke ụbọchị ya.
Onyekachi Nwachukwu (@ikechi_onyi)
Onye na-agba French nke anyị agaghị ada mbà n'ịkwado. O nweela mmeri Freeride World Tour ruo afọ atọ, na mgbakwunye na nke ahụ, Worlds na X Games na Snowboard Cross. Na akaụntụ Instagram ya, o gosipụtara nna ya, ịkekọrịta foto na vidiyo nke nwa ya nwanyị. Chọrọ ọzọ ihe mere ị ga-eji na-eme ya?
Icerị ugwu Ice bụ otu n’ime ihe omume na-atọ ụtọ mmadụ ịga n’ugwu ahụ. Egwuregwu a gụnyere ịrịgo site n'okike nke ugwu ma ọ bụ n'akụkụ mmiri mmiri ice. Ọ na-achọ ọtụtụ nguzogide, na mgbakwunye na ihe kwesịrị ekwesị nke na-eme ka onye na-arị elu nwee ọganihu na ụdị ndị a. Nọ ebe oyi na-atụkarị ma ebe mmiri na-agba, ọ na-abawanye ihe isi ike na ihe egwu Yabụ, ndị njem ga-anọ n 'ọnọdụ anụ ahụ nke ọma yana iji ihe nchekwa iji gbochie ihe ọghọm ma ọ bụ ọdịda ọ bụla, na ọnọdụ okpomọkụ gbadata n'okpuru efu.
Ọ bụrụ n ’ịnwa anwa ịnwale ya, anyị ga-ahapụrụ gị ụfọdụ aro nke ebe dị ịtụnanya na-eme ịrị ugwu:
Ọ bụ ebe zuru oke maka ndị chọrọ ịmalite ma ọ bụrụ na ịchọrọ iso ndị ọrụ ibe gị ndị ọkachamara. Ebe a nwere ntuziaka ndị ọkachamara maka ịgagharị glaciers nwere nnweta site na helikopta ma ọ bụ ụgbọ elu ski.
A kpokọtara ebe ileta, ezigbo maka ịrị ọzụzụ dị ka ọ na-enye ascents niile ogo na pụtara mma ice. Zọ ndị kachasị ewu ewu bụ Chia na Pegasus na mpaghara Amphitheater, na Dropline na Dracula na mpaghara Dropline.
Otu n'ime ebe kachasị mma maka ndị mbido na Europe, n'agbanyeghị na ọ na-enye ịrịgo maka ndị ọkachamara. Ọ nwere ama ebe dị ka Crack Baby, Blue Ime Anwansi na Black Nova.
BUTR F NT FR YOUR RER WITH N'WITHLỌP CATA
Omume niile n'ugwu chọrọ ihe ọmụma na nkwadebe tupu ị nwee ike ịnụ ụtọ egwuregwu na adrenaline. Anyị nwere mmụọ mmụọ dị egwu ma anyị nwere agụụ maka egwuregwu dị ka gị, yabụ anyị anaghị etinye nchekwa n'akụkụ ma anyị na-echebara ihe niile dị mkpa iji na-eme egwuregwu ugwu:
Dị mkpa akụrụngwa:Dịka anyị kwurula na mbụ, ọ dị ezigbo mkpa ịnwe ngwaọrụ dị mkpa ma zuru oke iji mee egwuregwu ị họọrọ. Tupu ị gawa, lelee na ị nwere akụrụngwa niile, yana ha dị mma.
Kwesịrị ekwesị uwe:Mgbe ị na-aga ebe ekpughere na oke oyi, ọ dị mkpa iyi uwe kwesịrị ekwesị maka egwuregwu ka ị ghara ịta ahụhụ ọ bụla ma ọ bụ tinye ahụike gị n'ihe egwu.
Ọnọdụ ahụ ike:Ozugbo anyị lebara egwuregwu a ga-eme anya, gbaa mbọ hụ na ị na-emega ahụ ma kwadebe onwe gị n'ụzọ anụ ahụ na akparamaagwa maka mmemme na ihu igwe dị ala.
Soro ndụmọdụ:Gaa tupu ị na-eme atụmatụ. Chọọ ma gee ntị na ndụmọdụ ndị ọkachamara ma soro ntuziaka nke ndị nwere ahụmihe karịa n'ọhịa.
Anyị na-atụ anya na isiokwu a abụrụla ihe nduzi maka njem gị ọzọ na ugwu na ịnwa ike ịma aka ọhụrụ na 2021. Ekwela ka ihe ọ bụla gbochie gị freeriders! Na gị, gịnị ka nnwere onwe pụtara?
Mụtakwuo banyere snowboarder Katia Martinez!
Obi dị anyị ụtọ na Katant Martínez, ọkachamara freerider, onye na-akụzi mmiri ozuzo na onye na-akụzi sọfụ si n'aka Santander bịara leta anyị pụrụ iche nke ukwuu, nke ka nke bụ, ezigbo ihe atụ nke mmụọ.